एमालेमा सर्वसम्मत असम्भवः ओलीको सूचीमा पर्न नेताहरूको कसरत - Sankalpa Khabar
एमालेमा सर्वसम्मत असम्भवः ओलीको सूचीमा पर्न नेताहरूको कसरत
१० मंसिर ०८:०३
काठमाडौँ । दसाैँ महाधिवेशन स्थल चितवन आइपुगेका एमाले प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालेका छन्। आकांक्षीहरूले प्रदेश–प्रदेशका प्रतिनिधिमाझ केन्द्रीय सदस्यका लागि लबिङ गरिरहेका छन्।
पदाधिकारीमा सर्वसम्मत गराउन प्रयास भैरहे पनि केन्द्रीय सदस्यमा भने त्यो प्रयास सफल नहुने देखिएको छ। महाधिवेशनले दुई सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नेछ। केन्द्रीय सदस्यमा दोब्बरभन्दा बढी प्रतिनिधि आकांक्षी देखिएका छन्। आकांक्षी बढी भएपछि एमालेले निर्वाचनको तयारी पनि गरेको छ।
प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन भित्रभित्रै लबिङ तीव्र पारेका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनमा निर्वाचन भए चिट वितरण हुने भनेपछि नेताहरूले उनको सूचीमा पर्न कसरत गरिरहेका छन्।
९ माघ १३:४५
११ माघ ०९:२९
८ माघ ०९:५०
पर्सामा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरमा पहिलो व्यक्तिको मृत्यु
८ माघ ०८:३४
अर्ली इलेक्सनमा हाम्रो असहमति होइन : शंकर पोखरेल
७ माघ १५:५२
७ माघ १४:०८
रोल्पाको ऐतिहासिक होलेरी बजार अतिक्रमणको चपेटामा
८ माघ १७:४६
१२ माघ १५:२३
जनसंख्याभन्दा मतदाता धेरै कसरी ?
१४ माघ ०७:१७
भर्चुअल माध्यमबाट कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै
१४ माघ ०७:०१
आजको मौसम अवस्था कस्तो छ ?
१४ माघ ०६:५०
१४ माघ ०६:४०